Chipiri, July 24, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Kunyange mushambadzi wese achibvumirana kuti kushambadzira kwemuromo inzira yechokwadi yekuwedzera kuoneka nekutengesa, vazhinji vanoramba vari pakurasikirwa kwemaitiro ekuronga izwi rakabudirira remuromo Facebook. Ikoko ndiko Booshaka inogona kubatsira. Booshaka inorerutsa pasocial media izwi rekushambadzira kwemuromo nekubatsira iyo brand kuti inzwisise zvirinani fan-base yavo uye vagadzire hukama nevateveri vavo nevateveri.
Booshaka ine musoro wepaFacebook dhata uye inopa mazano akakosha aunogona kushandisa mukutsvaga kuwanikwa uye kugadzirwa, kunzwisiswa kwevatengi, kutsvagirwa kwemusika, kushambadzira kwekushambadzira uye kugadzirisa, chiratidzo chemuchinjiro-wekushambadzira uye kukoshesa, kukwikwidza kuongorora, kuenzanisa, kuyera uye nezvimwe.
Booshaka inopa nzwisiso kune vepamusoro mafeni kubva pamazita emakomendi, kuda uye zvimwe zviitiko. Booshaka inopfuura kupfuura pakuonekwa kwepanyika kana kuvapo kunopa kukosha kune mupiro we fan uchienderana nemhando uye kukanganisa. Mushambadzi anowana nzwisiso mune fan fan uye chiitiko chazvino futi. Njere dzakadai dzinotendera mushambadzi kuti atarise pamhando chaiyo yevanhu uye azive zvinokwezva kudzvanya uye chiitiko pakuvandudza zvirongwa zvezvenhau uye nzira dzekubata.
Muenzaniso Wepamusoro Fans Leaderboard:
Booshaka inopfuura pamusoro pekubaya kumusoro. Nepo izvo zvekutanga Wepamusoro fan Leaderboard inopa mabhureki aine maonero pane izvo chaizvo zvinoitika, nhau dzekudyisa optimization maficha anobatsira mabrandi kuvandudza kudyidzana uye nekudaro inosimbisa kubatanidzwa kwe fan. Iyo Social Rewards ficha inobvumidza kumisikidza zvirongwa zvekupa mubayiro vateveri vepamusoro, kuwedzera kutendeka kushambadzira kunzvimbo yemagariro enhau. Chimwe chiitiko chemberi, Wepamusoro Fans Pro inobatsira kuwedzera kuwedzera kwekugadzirisa, uye inopa zvimwe zvinhu zvinonzwisisika - kusanganisira imwe inobatsira kubvisa spam.
Muenzaniso Wepamusoro Fans Pro Leaderboard:
Booshaka inopa mamiriro ezvinhu pakukora nekuisa mubatanidzwa wevateveri - iyo inopa maonero akadzika mune iyo data. Kuisirwa kuri kukurumidza uye kuri nyore, danda pa Booshaka Vepamusoro Fans, iyo yekutanga kupihwa, ndeye mahara. Kunyangwe iyo yepamusoro Fans Pro vhezheni yakasununguka kwemazuva manomwe ekutanga. Kuwedzera mitengo kunoenderana nenhamba yevafeni vauinazvo!
Tags: booshakaFacebookfacebook fansfacebook likesFacebook Kushambadzirapamusoro mazwivepamusoro vateveritop likes
Kutsvaga Kunobhadharwa Kunotora Oganiki Kutsvaga?